Aldị | KONGOLISOLO
Ofdị agụmakwụkwọ a enyere ndị klas ahụ ihe ga-abụrịrị nke kachasị njọ ka oghere nke amaghị ihe dị nke kewapụrụ obere ụlọ akwụkwọ na klas nke elu ...	GỤKWUO
Ndi Black / African Man duhiere kemgbe amuru ya: anyi ghaara ya ugha gbasara omimi ya, anyi ghaara ya ugha banyere ndi nna nna ya, akuko ya, ike ya, nnukwu ya na mmezu ya, anyi n’eme ka o kwenye na odighi ihe. na-enweghị onye na-emegide ya… (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: Mee 19, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Na o ghaghi atukwasi onye obula obi ma o bughi nwanne ya. Ha ghaara ya ụgha n’ụlọ akwụkwọ, ha ghaara ya ụgha n’ụlọ ụka, n’ụlọ alakụba ha…	GỤKWUO
Ezigbo ihe kpatara kpaliri Marcus Garvey ịkwado usoro agụmakwụkwọ pụrụ iche nye ndị ojii / ndị Africa: Marcus Garvey bụ onye nlebara anya na-ahụ anya, ọ hụrụ nke ọma na n'okpuru usoro agụmakwụkwọ na United States.
Site na: KongoLisolona: Mee 11, 2020 13: 52 Enweghị asịsa
O kwubiri na usoro a metọrọ ndị isi / ndị Africa; na ya mere enweghi ike ikwe ka ha tolite: anyi apughi iju anyi n’akwukwo akwukwo nke ndi ocha, ndi…	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: April 18, 2020 00: 44 Enweghị asịsa
Akwụkwọ izizi nke mahadum ahụ bụ "Nnyocha", onye kpọrọ onwe ya mahadum kwesịrị ịbụ onye nyocha, ọ ga-enwerịrị ike ichepụta echiche. L ...	GỤKWUO
Ezigbo ihe niile, KongoLisolo na-etinye n’aka gị ihe ọmụma Coronavirus ụwa iji nye gị ohere ka a gwa gị kwa nkeji banyere mmalite ọrịa a na-egbu egbu: (Mba, ọnwụ, ihe naghachi, ikpe ndị siri ike, ikpe ndị mechiri emechi; na otu esi ekpesa ikpe nke Coronavirus)
Site na: Admi1na: March 29, 2020 12: 16 Enweghị asịsa
Covid-19 World Map dị na KL naanị maka gị - Pịa na maapụ iji hụ ikpe ndị enwetara ọnwụ site na obodo, ókèala ma ọ bụ ụzọ njem. Coronavirus (COVID-19) metụtara ...	GỤKWUO
Ọrụ dị iche iche icheta: olee ebe Marchbọchị Mach 8 ga-abịa? Machị 8, ọ bụ ụbọchị nwanyị ka ọ bụ nke nwanyị na - arụ ọrụ ??
Site na: KongoLisolona: March 8, 2020 03: 10 Enweghị asịsa
Ànyị na-echeta ndị ọrụ New York nwụrụ na ọkụ nke ụlọ ọrụ akwa na 1908, ka ọkụ a bụ akụkọ mgbe ochie? Ọ na-elekọta ndị German Clara…	GỤKWUO